DAAWO: QATAR OO HESHAY TAAGEERADA UGU BADAN EE WADAMADA AWOODA LEH, SACUUDIGA OO KU DHEGAN FARMAAJO &… - Magudhe news
Wararka, Wararka maanta
DAAWO: QATAR OO HESHAY TAAGEERADA UGU BADAN EE WADAMADA AWOODA LEH, SACUUDIGA OO KU DHEGAN FARMAAJO &…
June 15, 2017 Sadaam Ciiltire	Leave a comment
Khilaafka Dalalka Carabta ayaa cirka ushareeyay iyadoo dowladda Qatar ay heleyso awood balaran oo dhanka taageerada ah.
Dalalka Turkey, Iiraan iyo Ruushka ayaa awood siiyay Qatar, halka Sacuudiga uu si lama filaan ah usheegay in Khilaafka kala dhaxeeya dalkaas darted aysan raali uga aheyn in baahi ay udhintaan ayna diyaar uyihiin iney mucaawino gaarsiiyaan hadii loo baahdo.
Mareykanka ayaa War lama filaan ah soo saaray halka Qatar ay awood usheegatay dalalka Jabuuti iyo Eriteria kuwaas oo ay ciidamadeedii kala baxday.
Imaaraadka ayaa dhankiisa sheegay in arinta khilaafka ah aysan horseedi karin iney dalalka Carabta ay duulaan dagaal ku qaadaan Qatar, laakiin maamulka Doha oo arintaas ka jawaabaya ayaa heegan celiyay ciidamadiisa.
Soomaaliya ayaa wali mowqif wanaagsan ka taagan khilaafkan, laakiin dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa ku cadaadinaya iney xariirka ujarto Dalka Qatar hadii kale cadaadis dowladeed iyo mid shacab la saari doono.
Si kastaba, waxaa jira warar sheegaya iney jiraan hormaro laga sameeyay dadaaladda lagu xalinayo khilaafka dalalkan ee hormuudka uu ka yahay Madaxweynaha Erdogan kaas oo wafdi udiray Qatar sidoo kalana aadi doona Sacuudiga iyo Imaaraadka.
Previous PostDowlada Eritreya oo ka mid ah dalalka ku yaalla Geeska Afrika ayaa bedeshay mowqif dhexdhexaadnimo ah oo ay horey uga qaadatay khilaafka ka dhex aloosan xulufada Sacuudiga iyo dowlada Qatar.Next PostWARARKII UGU DAMBEEYAY EE HOWLGALKII HOTEEL POSH & CIIDAMADA GAASHAAN OO AWOOD USHEEGTAY SHABAAB